ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | USA တွင်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့သတင်းအချက်အလက် | USAHello
သင် USA တွင်သောအရပ်တို့ကိုမရနျလိုအပျပါနဲ့? သငျသညျသှားဖို့လိုအအကွာအဝေး၏အချို့လမ်းလျှောက်ဖို့ဝေးလွန်းများမှာ. သငျသညျအလုပျမှရရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ကြောငျး, နှင့်စျေးဝယ်ဖို့သောနေရာများ. ထိုကဲ့သို့သောဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားရထားအဖြစ်န်ဆောင်မှုများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟုခေါ်ကြသည်, သို့မဟုတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကူးအပြောင်း. ဒီနေရာတွင်ဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားစနစ်များကိုနားလည်ကူညီရန်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဖြစ်ပါသည်.
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး USA တွင်အသက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ပတ်ပတ်လည်ရယူခြင်းသင်၏အချိန်တွေအများကြီးတက်ယူနိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကြီးတွေမွို့တှငျနထေိုငျခဲ့လျှင်, သငျသညျအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်, ဘတ်စ်ကားအပါအဝင်, အငှားယာဉ်များ, မြေအောက်ရထား. အတော်များများကမြို့ကြီးများတွင်လည်းဗင်သို့မဟုတ်ကားများအထူးသဖြင့်အကြီးတန်းနိုင်ငံသားများနှင့်မသန်စွမ်းများ. သင်ဘယ်မှာအသက်ရှင်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနီးရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်အိမျတျောကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစား, ဖြစ်နိုင်လျှင်.
အစဦးတွင်, ကလမ်းညွန်နားလည်ရန်ခက်ခဲမည်အကြောင်းနှင့်သင်ပျောက်ရစေခြင်းငှါ. google Maps သင်ရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ပါကကူညီဖို့အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်လမ်းလျှောက်နေတဆင့်သွားကြသည်ရှိရာရန်သင့်အားလမ်းညွန်ပေးတော်မူမည်သည့်အွန်လိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သို့မဟုတ်ကားမောင်း.
ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားများသောအားဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်အရပျမှရရန်စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်း. သူတို့ကလူဦးရေထူထပ်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်, သို့သော်.
သင်မကြာခဏအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်ဘတ်စ်ကား Pass နှင့်မဝယ်နိုင်. အကြီးတန်းကျောင်းသားများနှင့်ပင်အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားစီးနိုင်မည်အကြောင်း.
သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေနေခြင်းအားဖြင့်သင့်မြို့အတွက်ဘတ်စ်ကား pass ကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတှေ့နိုငျ. သင့်ရဲ့မြို့၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါထို့နောက်စကားများ “ဘတ်စ်ကားသတင်းအချက်အလက်ဖြတ်သန်းရတယ်။”
•အများစုမှာဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းအမည်သို့မဟုတ်အရေအတွက်ရှိသည်. ဥပမာ, သငျသညျဘတ်စ်ကားအရေအတွက်ကစီးစေခြင်းငှါ 52. ဒါကဘတ်စ်ကားအတူတူလမ်းကြောင်းအခါတိုင်းလိုကျနာပါမညျနှင့်အတူတူပင်သောနေရာများမှာကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်.
•သင့်ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းရှာပါ. သင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်မြို့လုံးကိုဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများ၏မြေပုံအွန်လိုင်းရှိသင့်ပါသည်. အကူအညီလိုလျှင်, မြို့ထဲတွင်အဓိကဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကိုသွားနှင့်သတင်းအချက်အလက်စားပွဲပေါ်မှာထံမှအကူအညီတောင်းခံ. သူတို့ကသငျသညျပေးရမြေပုံပုံနှိပ်ခဲ့ကြပေမည်, အများစုဘတ်စ်ကားဘူတာကြီးမားသောသတင်းအချက်အလက်ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်မြေပုံရှိ. အတော်များများကဘတ်စ်ကားလည်းတစ်ဦးချင်းစီမှတ်တိုင်မှာရောက်ရှိမည်ကြိမ်စီစဉ်ထားပါပြီ.
•ဘတ်စ်ကားများသောအားဖြင့်ရက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောနာရီများ (တနင်္လာနေ့, အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, နှင့်သောကြာနေ့) နှင့်တနင်္ဂနွေ (စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေ). အဆိုပါဘတ်စ်ကားလည်းအားလပ်ရက်အပေါ်ကို run ကွဲပြားခြားနားသောနာရီရှိသည်သို့မဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောခရစ္စမတ်အဖြစ်.
•အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းသင်တို့၏ပထမဆုံးနေ့ရှေ့၌သင်တို့ဘတ်စ်ကားစီးနင်းလေ့ကငျြ့. ဒီလမ်း, သငျသညျဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းသိကြပါလိမ့်မယ် (လမ်းများပေါ်တွင်ဘတ်စ်ကား drives တွေကို) သငျတို့သချွတ်ရနျလိုအပျရှိရာဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကိုအသိအမှတ်မပြု.
•သင့်အနီးဆုံးဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကိုရှာပါ. အစောပိုင်းအမှု၌ဘတ်စ်ကားစောမိနစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ. မကြာခဏ, ယာဉ်အသွားအလာသို့မဟုတ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတွေအများကြီးရှိပါလျှင်, ဘတ်စ်ကားနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည်. သင်အချိန်ပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရောက်လာသေချာစေရန်အစောပိုင်းဘတ်စ်ကားယူချင်စေခြင်းငှါ.
•သင်သည်သင်၏အရေအတွက်ကလာမယ့်အတူဘတ်စ်ကားကိုမြင်သောအခါ, ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နိမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်မတ်တပ်ရပ်နှင့်သင့်လက်မောင်းကိုချီလွှဲ. ဒီလမ်း, ယာဉ်မောင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်တက်ကောက်ဖို့သိရကြလိမ့်မည်. အများအားဖြင့်, သင်ယာဉ်မောင်းများကဘတ်စ်ကား၏ရှေ့တံခါးနားမှာပေါ်ရ.
•ဘတ်စ်ကားမောင်းသူသည်သင်၏ခငွေပေးချေ, သင့်ရဲ့ဘတ်စ်ကားစီးများအတွက်စျေးနှုန်းအရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဘတ်စ်ကားတွေအများကြီးစီးပါလိမ့်မည်ဆိုပါကဒါဟာတစ်ဦးသည်လစဉ်ဘတ်စ်ကား pass ကိုဝယ်ခြင်းငှါမကြာခဏစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါသည်. သင်ကဘတ်စ်ကားများအတွက်အတိအကျအပြောင်းအလဲရှိသည်ဖို့လိုအပ်. ဘတ်စ်ကားကုန်ကျစရိတ်လျှင်ဒီကိုဆိုလိုတယ် $1.50 သင်တဦးတည်းဒေါ်လာစျေးနှင့်ငါးဆယ်ဆင့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်. အဆိုပါဘတ်စ်ကားမောင်းသူကိုသင်ပြောင်းလဲမှုကိုမပေးပါလိမ့်မယ်.
•သင်ရှိရာဘတ်စ်ကားချွတ်ရဖို့မသေချာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဘတ်စ်ကားမောင်းသူကိုပြောပြ. သင်သွားကြသည်အရပျ၏နာမတော်ကိုပြောပါတယ်ကြောင့်သင်တို့နှင့်အတူစာရွက်တစ်ရွက်ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းစက္ကူပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအမှီရှိသည်ဖို့လိုပေမည်.
•အမသန်စွမ်းသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လက်ခံများသောအားဖြင့်တစ်ဦးဘတ်စ်ကား၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး. သငျသညျကွီးရှယျအိုမြားဤထိုင်ခုံတက်ပေးရမည်, မသန်စွမ်းကလူ, သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ. သငျသညျငယျရှယျနှငျ့သငျဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့လျှင်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံပေးရယဉ်ကျေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အမေရိကန်တွင်သတိရ, တစ်ဦးထိုင်ခုံရဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထိုင်ခုံမှပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သငျသညျအဟောင်းများကိုဖြစ်ကြပြီးအဘယ်သူမျှသင့်ကိုသူတို့ထိုင်ခုံပေးသည်ဆိုပါကဒါမကောင်းတဲ့မခံစားရဘူး.
•သင်သည်သင်၏ရပ်တန့်ရောက်ရှိခင်မှာ, သငျသညျတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးခေါင်းလောင်းသို့မဟုတ်ဉသြသံမြည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်ဘတ်စ်ကားမြို့ရိုးသို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, ရပ်တန့်ဖို့ဘတ်စ်ကားမောင်းသူအားပြောပြရန်. သငျသညျဘတ်စ်ကားတိုင်းမှတ်တိုင်မှာရပ်သေချာမဟုတ်လျှင်ဤသို့ပြု. သင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အကူအညီတောငျး.
•ပုံမှန်အားဖြင့်, သငျသညျဘတ်စ်ကား၏ချွတ်ရဖို့နောက်ကျောသို့မဟုတ်ခြမ်းတံခါးကိုကိုသုံးပါ. ဘတ်စ်ကားချွတ်ရဖို့ရွေ့လျားရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း. သင်သည်အခြားခရီးသည်ချွတ်ရနှင့်သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကူးယူဘယ်လိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
မြေအောက်ရထားနှင့်မက်ထရိုစနစ်များဘူတာရုံမှဘူတာမှလူများကြီးမားနံပါတ်များကိုရွှေ့ကြောင်းမြို့ရထားလမ်းများမှာ. အဆိုပါရထားအများစုမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိမြေအောက်ခရီး, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံရထားလည်းမြေပြင်အထက်သွားပါ. ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ, သူတို့အသွားအလာများက unaffected နေကြသည်ကြောင့်မြေအောက်ရထားသို့မဟုတ်မက်ထရိုစနစ်ကမကြာခဏသွားလာအများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, ယင်းမက်ထရိုစနစ်ကမကြာခဏဘတ်စ်ကားစီးထက်ပိုမိုကုန်ကျ.
Each big city hasadifferent subway system. အားလုံးမြေအောက်ရထားစနစ်များများအတွက်, အခြို့သောအမှုအရာအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း:
•သင်ခရီးသွားလာနိုင်မီသင်ကလက်မှတ်မဝယ်သို့မဟုတ်ရှောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. တိုင်းဘူတာရုံများတွင်လက်မှတ်စက်တွေရှိပါတယ်. အကူအညီလိုလျှင်, ဘူတာရုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိလိမ့်မည်. ကူညီမယ့်သူတစ်ဦးနှင့်အတူလက်မှတ်ပြတင်းပေါက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်.
•ကျွန်တော်မြေအောက်ရထားစနစ်ကလိုင်းများနှင့်ဘူတာများပြသနိုင်ဖို့အတွက်မြေပုံတစ်ခုရှိပါတယ်. မြေအောက်ရထားလိုင်းများရထားလိုင်းများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. သူတို့ဟာမှာရပ်တန့်ဖို့လမ်းကြောင်းများနှင့်ဘူတာများခန့်ထားပြီ. သင်ကမြေအောက်ရထားမြေပုံဖတ်ရှုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
•တစ်ခုချင်းစီဘူတာရုံရထားပေါ်တွင်နဲ့ off ရတဲ့အတှကျတစ်ဦးထက်ပိုပလက်ဖောင်းရပါလိမ့်မယ်. သင်ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်ဖို့သွားကြသည်ထားတဲ့ဦးတည်ချက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
•အများစုမှာမြေအောက်ရထားစနစ်များကိုတစ်ခုထက် ပို. လိုင်းရှိ. သင်သည်သင်၏စတင်ဘူတာရုံနှင့်ဦးတည်ရာဘူတာရုံအပေါ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလိုင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းအခြားဘူတာရုံမှာလိုင်းများနှင့်ပလက်ဖောင်းကိုပြောင်းလဲရန်ရှိစေခြင်းငှါ.
•အတော်များများမြို့ကြီးများတွင်မြေအောက်ရထားစနစ်ကသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူအွန်လိုင်းလမ်းညွှန်များရှိ. များအတွက်အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်များရှိပါတယ် ဘော်စတွန်, Los Angeles မြို့, နယူးယောက်, San Francisco Bay Area, နှင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီ.
သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်အခြားအမြေအောက်ရထားစနစ်များများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့မြို့၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါထို့နောက်စကားများ “မြေအောက်ရထားစနစ်ကသတင်းအချက်အလက်။”
သင်တစ်ဦးသေးငယ်မြို့မှာသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်များ၏ကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်ပါလျှင်, သငျသညျကားနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းကားတစ်စီး-ရေကူးကန်နိုင်မည်အကြောင်း (ကားတစ်စီးရှိပြီးသူတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးစီးနင်းရ). တခါတလေ, အကောင်းဆုံးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ဦးစက်ဘီးလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်စီးနင်းနေသည်.
သငျသညျအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့မွို့တှငျနထေိုငျခဲ့လျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းကားတစ်စီးမလိုအပ်ပါဘူး. သို့သော်, သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မက်ထရိုစနစ်ကမပါဘဲမြို့ဆင်ခြေဖုံးတွင်သို့မဟုတ်တစ်မြို့အတွက်အသက်ရှင်လျှင်, သငျသညျကားတစ်စီးရဖို့လိုပေမည်. ကားတစ်စီးထားရှိခြင်းကအလွန်အဆင်ပြေ. သငျသညျကားတစ်စီးရနိုင်ခင်မှာ, သင်တစ်ဦးမောင်းနှင်စမ်းသပ်မှုရှောက်သွားရကြမည်. သငျသညျကားအဘို့နှင့်မော်တော်ကားအာမခံအတွက်ပေးချေနိုင်ပါလိမ့်ဖို့လည်းရှိတယ်. USA တွင်, ပညတ္တိကျမ်းကိုသင်ကားတစ်စီးအာမခံရှိရမယ်ပြောပါတယ်. သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် USA တွင်ကားမောင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်. သင်ကကားမောင်းစည်းမျဉ်းများသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်လုပ်နိုင်သည် ဘာသာစကားမြားစှာရှိအမေရိကန်မောင်းသူမယ့်လက်စွဲကိုဖတ်.
စက်ဘီးကသင်၏မြို့ပတ်ပတ်လည်ရဖို့ကွီးတန်ဖိုးနည်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးသေးငယ်မြို့မှာအသက်ရှင်လျှင်စက်ဘီးအထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏. အတော်များများကပိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးများယခုမြို့ပတ်ပတ်လည်စက်ဘီးကပိုမိုလွယ်ကူစေရန်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများ.
သို့သော်, စက်ဘီးကိုခိုးယူရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြပြီးအကြီးအဝယ်လိုအားများမှာ, ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်သော့ခတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်အစဉ်အမြဲနေတဲ့အစိုင်အခဲသတ္တုအရာဝတ္ထုမှတစ်ခုလုံးကိုဘောင်များနှင့်ဘီး secure ရန်သေချာစေပါ. သင်ကြား သင့်ရဲ့စက်ဘီးသော့ခတ်ဖို့ဘယ်လို. အများစုမှာကျောင်းများနှင့်အလုပ်ခွင်စက်ဘီးရပ်နားဒေသများရှိ.
တစ်ဦးကတက္ကစီကိုသင်တယောက်ကိုတယောက်အရပ်မှသင်တို့ကိုယူငှားရမ်းကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်. တက္ကစီနယူးယောက်နဲ့တူကြီးတွေမြို့ကြီးများအတွက်ဘုံများမှာ, တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတွေနေ့တိုင်းတက္ကစီယူ. သို့သော်, တက္ကစီကအရမ်းစျေးကြီးတယ်, သူတို့အသွားအလာမှာညပ်မိရနိုင်, ပဲဘတ်စ်ကားနဲ့တူ.
သောနေရာများရရှိရန်တစ်ခုမှာကြီးမြတ်လမ်းတစ်ကားကိုသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကားကြုံမှတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးနင်း-ရှယ်ယာသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဤလူမျိုးအုပ်စုတစ်စုအတူတူပင်တည်နေရာတကားထဲတွင်အတူတကွစီးဆိုလိုတယ်. ဥပမာ, သင်ကဲ့သို့တူညီသောအလုပ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်သူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအနီးရှိအသက်ရှင်လျှင်သင်သည်အလုပ်လုပ်ကားကြုံစေခြင်းငှါ,. သို့မဟုတ်သင်ကျောင်းမှလှုပ်ရှားမှုများသှားဖို့သင်တို့၏သားသမီးတစ်ဦးကားကြုံတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ. သငျသညျကားကြုံသွားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကားများ၏ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးတရားဝင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်အာမခံရှိပါတယ်သေချာအောင်ရမယ်.